10 waxyaalood oo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan qaadan DMAA | AASraw
/blog/Gallery/ 10 waxyaalood oo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan qaadanin DMAA
Posted on 11 / 28 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
DMAA waa daawo si farsameysan loo soosaaray oo ka caawisa dhismaha jirka, gubida dufanka jirka iyo hagaajinta xasuusta mudada gaaban iyo falcelinta falcelinta. Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay faa'iidooyinka qiyaasta DMAA iyo dhibaatooyinka soo raaca ee 1,3-dimethylamylamine.
Waa maxay DMAA?
Understanding waa maxay is DMAA waa inuu noqdaa mid ka mid ah waxyaabaha kor u qaadaya waxqabadka cayaaraha waa inuu xooga saaraa ka hor inta uusan u dhicin inuu isticmaalo kaabista. DMAA oo ah qaabka gaaban ee kiimikada loo yaqaan dimethylamylamine waa daawo horey loo aaminsanaa in laga soosaaray saliida geraniumka dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaris, waxaa lagu cadeeyay in 1 dimethylamylamine waxaa lagu farsameeyay sheybaarada.
Sidoo kale loo yaqaan 1,3 DMAA, daroogadu waxay la wadaagtaa qaab la mid ah daawooyinka laga helo jeermiska. Tani waxay ahayd sababta dad badani u maleeyeen in DMAA ay sidoo kale ka tirsan tahay isla daroogada. Tababbarka hore ee DMAA waa erey u dhigma dadka isticmaala dheeri ahaan maadaama badanaa ay isticmaalaan kuwa doonaya inay bilaabaan jirkooda iyo goynta kulamadooda.
Budada DMAA waxaa markii ugu horaysay suuqa keenay Eli Lilly iyo Company sanadkii 1944. Daroogadu waxay heshay adeegsi badan oo daawada ah iyada oo ah sanka suuxisa. Daawada ayaa loo adeegsaday ujeedkan maxaa yeelay waxaa la ogaaday inay gaarsiisay natiijooyin la mid ah isticmaalka ephedrine iyo pseudoephedrine.
Markii hore, dad badan ayaa rumaysnaa in DMAA laga soo qaatay saliida geranium-ka ubax. Sababtaas awgeed, waa wax caadi ah in la helo shirkado badan oo wax soo saara Kordhinta DMAA oo muujinaya sawirada qaybaha dhirta geranium-ka ubax sida xididdada iyo jirida. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo aaminaadani ay sii dheeraatay, baaritaannada shaybaarka ee DMAA ayaa si kale u muujiyey.
Waxaa la cadeeyay in DMAA si shaybaar ah looga helay shaybaarka mana ahan wax dabiici ah sida la rumaysan yahay muddo dheer. Ka dib markii ugu horreysay ee suuqa la soo galiyo, daroogada ayaa si weyn loo iibiyay iyadoo ciyaartooyda ay la dhacsan yihiin natiijooyinkiisa. Tani waxay ahayd illaa 1983 markii kabitaanka suuqa laga saaray.
Ka bixitaanka waxaa sababay sheegashooyin ah inaysan badbaado u ahayn iibinta farmasiyada dadweynaha. Mamnuucidan ayaa sababtay yaraanta daroogada inkasta oo ay wali ka socoto suuqa madow. Iibinta dadweynaha ee kaabista DMAA ayaa dib loo bilaabay 2006 markii lagu iibsaday magac cusub, Geranamine.
Kordhinta DMAA laguma iibin oo keliya. Taabadalkeed, waxaa lagu daray miisaanka dheellitirka miisaanka oo loo qoondeeyay daroogada horumarinta waxqabadka cayaaraha. Dib-u-soo-kicinta daroogada ee farmashiyeyaasha dadweynaha ayaa ku baaqday khilaafaad badan oo ku saabsan nabadgelyada isticmaalkeeda waxqabadka kor u qaadista cayaaraha.
Walaacyadu waxay ahaayeen kuwo aad u xasaasi ah oo Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) ay weydiisteen soo-saareyaasha kaabayaasha si ay u caddeeyaan inay ku habboon tahay adeegsiga iyadoo aan la keenin saameyn cabsi leh. Wadamo ay ka mid yihiin Kanada ayaa iyaguna walaac ka muujiyey ujeeddadiisa, waana la mamnuucay.
Sidoo kale amaan uma ahan in ay isticmaalaan ciyaartooyda tartamaya sidii sanadkii 2010, Hay'adda la dagaalanka daroogada ee adduunka ayaa dhawaan ku dartay walax waxyeelo leh oo mamnuuc ah in la isticmaalo. Sidaa darteed, ciyaartooy lagu helo inuu daroogada isticmaalayo waxay aad ugu dhowdahay in laga mamnuuco kaqeybgalka cayaaraha tartanka. Iyada oo ay sabab u tahay khilaafaadka ku xiran adeegsigiisa, DMAA sidoo kale waa laga mamnuucay militariga Mareykanka.
Kaabista ayaa dhowaan laga soo saaray bakhaarradii militariga si loo xakameeyo isticmaalkeeda. New Zealand gudaheeda, isticmaalka daroogada sidoo kale lama ogola. Waxaa sidoo kale loo arkaa inay sharci darro ka tahay Mareykanka xilligan.
Maxaa loo isticmaalaa DMAA?
Habka shaqada dhabta ah ee, DMAA lama caddeyn. Si kastaba ha noqotee, daroogada ayaa loo maleynayaa inay la mid tahay ficilka adrenaline dabiiciga ah. Marka la isticmaalo, DMAA waxay si toos ah u saameysaa nidaamka dhexe ee neerfaha.
Daawada waxaa loo yaqaanaa inay soo saarto kicinta sare ee la mid ah isticmaalka kafeega. Si kastaba ha noqotee, qaabka ficilka ee DMAA wuu ka duwan yahay kan kafeega. Markii la qaato, DMAA waxay sababtaa soosaarida noradrenaline oo ah hormoon firfircoon inta lagu jiro xilliyada walaaca ama cabsida.
Hormoonka waxaa lagu soosaaray qanjidhada adrenal ee laga helo wax yar korka kelyaha. Marka la sii daayo, hormoonka waxaa lagu wareejiyaa dhiiga, tanina waxay keentaa kororka garaaca wadnaha.
Soosaarida noradrenaline sidoo kale waxay ku kicinaysaa nidaamka jirka inuu ka sii daayo gulukooska keydka glycogen. Tani waxay horseedaa socodka tamarta ee muruqyada jirka oo hagaagsan, waana tan inta badan ciyaartooydu doonayaan kahor jimicsiga. Isticmaalka DMAA sidoo kale waxay u horseedi doontaa xoogaa horumar ah dhinacyada qaarkood sida feejignaanta, dhiirigelinta iyo falcelinta waqtiga leh.
Tani waa mid ka mid ah sababaha aasaasiga ah ee DMAA ay si ballaaran u adeegsadaan cayaartoyda ka hor inta aan la bilaabin fadhiga tababarka. Daroogadu waxay bixisaa dareen tamar sare leh taasoo ka dhigeysa cayaaraha inuu doonayo inuu ku kaco waxqabad cuni doona tamarta xad-dhaafka ah. Isticmaalka DMAA wuxuu ka badbaadiyey ciyaartooyda celceliska dareenka tamarta ee la yimaada ficil kafeega badanaa la isticmaalo.
DMAA waa hagaajinta kafeega, kuwa u isticmaala muddo dheer waxay bilaabi karaan inay yeeshaan mukhaadaraad. Tani waxay ka dhigan tahay in isticmaalka la kontoroolo ay lama huraan tahay. Markii la isticmaalo, waxay ka xanaajisaa maskaxda si ay u kiciso dareen ah kor u qaadista tamarta weyn.
Dhiig kar sare ayaa la socda tan. Natiijada qaabkan ficil ahaan, dad badan ayaa u muuqda inay ku xadgudbaan daroogada. Si kastaba ha noqotee, ciyaartoyda qaar waxay u isticmaalaan daroogada ujeeddo wax ku ool ah oo ku saabsan jirkooda. Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah isticmaalka wanaagsan ee DMAA:
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee DMAA.
1. Gubashada dufanka
Badanaa, jidhku si dabiici ah ayuu u gubaa dufanka badan. Si kastaba ha noqotee, tani waxay ku dhici kartaa xawaare ka hooseeya waxa la jecel yahay. Si loo dedejiyo howsha isticmaalka kaabista waxaa lagu qaatay ciyaartooyda kor u qaada waxqabadka. Badanaa qaar ka mid ah waxyaabahan dheeriga ah ayaa ah steroids sida Nootropics.
Isticmaalka kaabayaasha noocan oo kale ah waxay si ku habboon u hagaajineysaa heerka gubashada. DMAA waxay waxtar u leedahay sida waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'supplements' ee gubida dufanka badan. Inta badan kalfadhiyada jimicsiga waxaa loogu talagalay in lagu gaaro natiijooyin badan, oo ay ka mid yihiin yareynta dufanka jirka ee xad dhaafka ah ee jirka siiya rafcaan aan loo baahnayn.
Dufannada xad-dhaafka ah ayaa sidoo kale khatar ku ah ladnaanta cayaaraha maadaama xaaladda noocaas ah ay kor u qaadi karto xannibaadda xididdada dhiigga. Marka tani dhacdo, waxaa jiri lahaa qulqulka ugu yar ee oksijiinta ee dhiigga iyo howlaha guud ee shakhsiga si aad ah ayey u saameyn doontaa. Hadda fure u ah ka fogaanshaha xaaladdan oo kale waa isticmaalka daroogada sida DMAA oo jirkaaga siisa heer sare oo tamar ah.
Marka firfircooni, isticmaaluhu wuxuu kufsi u gelayaa inuu ku lug yeesho nashaadyo cuni doona tamarta, natiijadaasna, waxaa yaraanaya dufanka jirka ee waxyeellada leh iyo kuwa aan loo baahnayn. , tanina waa mid muhiim u ah ciyaartooyda doonaya inay tan gaaraan gaar ahaan inta lagu guda jiro goynta xilliga goos gooska ah. Waxtarka daawadu waa mid aan xad lahayn.
Marka lagu daro kiciyaha sida kafeyn, DMAA waxaa lagu ogaadey inay hagaajiso dhaqdhaqaaqa jirka ee jirka qiyaastii 35%. Tani, markeeda, waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta heerka gubashada dufanka iyada oo loo marayo farqi weyn oo xusid mudan. Daroogadu waxay ku shaqeysaa iyadoo la hubinayo inay kiciso baruurta gubanaysa hore ka hor intaan jidhku u tilmaamin inay si dabiici ah u dhacdo.
Maaddaama ficilka DMAA uu si toos ah ugu xiran yahay habka dhexe ee neerfaha, daroogadu waxay xaqiijineysaa inay kicineyso ficilkan si dhakhso leh. Kicinta, CNS waxay ku falcelisaa adoo kicinaya falcelis silsilad ah oo awood u leh gubashada dufanka. Sidaa darteed, waxay xaq u lahaan laheyd in la isbarbardhigo ficilka DMAA iyo waxyaabaha kale ee dufanka ugu badan ee gubanaya suuqa.
2. Dhismaha Jirka
Waxa ugu muhiimsan kahor jimicsiga waa tamar. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay inaad eegto waxa ay u badan tahay inay ku siiso goobahan tamarta ah si aad horay ugu sii socoto. Mesomorph tababarka hore dmaa
waa nooca wax siinta dhise jirka madaxa ku habboon ee bilowga ah ee aad u baahan tahay si jimicsigaagu ugu guuleysto.
Sidii hore loogu qoray, daroogada waxaa loo yaqaanaa inay bixiso saameyn la mid ah pseudoephedrine. Daroogadani waxay u heli doontaa isticmaalaha qaab 'sare'. Tani waxay siinaysaa mid keyd tamar oo weyn oo lagama maarmaan u ah culeyska.
Natiijooyinka ugu wanaagsan, daawo bixisa tamar sare waa in la qaataa kahor kulanka tababarka. Tani waxay ku xirxireysaa isticmaalaha tamar xoog leh taas oo ah waxa waxqabad kasta oo kor u qaadaya ciyaartoydu waxay u baahan yihiin inay maalmahooda ku bilaabaan qoraal sare. Daroogada noocan oo kale ah waxay tan ku sameysaa iyada oo saameyn ku leh mid ka mid ah geeddi-socodka jirka ee dabiiciga ah.
Marka la qaato, daroogadu waxay wanaajisaa dheecaanka. Tani waa geedi socod caadi ahaan dhaca marka kuleylka xad-dhaafka ahi ku jiro jawiga. Jidhku wuu falceliyaa isagoo kordhiya cabbirka xididdada. Tan waxaa loola jeedaa in dhiig badan loo keeno maqaarka dushiisa si loo qaboojiyo.
Inta badan daawooyinka kordhiya waxqabadka waxay ka kooban yihiin nitric oxide oo dhiirrigelisa ballaarinta xididdada dhiigga iyada oo loo marayo xuubsiibashada. Tani waa faa'iido dheeraad ah oo loogu talagalay cayaaraha, gaar ahaan inta lagu jiro a tababarka hore. Markuu weynaado, aagga dusha sare ee qaadista dhiig badan si heer sare ah ayaa loo hagaajiyaa.
Tani waxay siin doontaa cayaaraha gunno dhaqdhaqaaqa dhiigga oo aan waligiis jirin kahor isticmaalka daroogada. Intaas ka dib, tababar xoog leh ayaa suurtagal ah, ciyaartuhuna wuxuu leeyahay culeysyo tamar ah si kor loogu qaado horumarka murqaha.
Si kastaba ha noqotee, isticmaalka DMAA ee ku saabsan ixtiraamkan ayaa la ogaaday inay ka soo horjeeddo waxa dadka intooda badani ka fili karaan daroogada kor u qaadaysa waxqabadka. Halkii laga xoojin lahaa vasodilation sida daawooyinka ugu badan ee nitric oxide, DMAA waxay sameysaa ka soo horjeedka. Waxay keentaa vasoconstriction oo caadi ah xilliyada ay heer kulka jawigu hooseeyo.
Waqtigaas oo kale, jirku wuxuu la halgamayaa inuu ilaaliyo heerkulkiisa, tanina waxaa sababa ka bixitaanka dhiigga maqaarka dushiisa. Tani, si kastaba ha noqotee, waxay dhacdaa marka qiyaasta ay aad u sarreyso oo aysan walwal ka qabin qof qorsheynaya inuu qaato DMAA.
3. Waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta xusuusta muddada-gaaban iyo ficil-celinta ficil-celinta
Qof kastaa wuu jeclaan lahaa inuu xasuusto wax kasta oo ay u baahan yihiin. Si kastaba ha noqotee, tani badanaa maahan kiiska maadaama dadka noloshooda ay la kulmaan dhacdooyin badan oo ka dhigaya mid adag in tani dhacdo. DMAA waxay noqon kartaa kaalmo waxtar leh wejigan.
Daraasado ay sameeyeen adeegsadayaasha kaabadan ayaa shaaca ka qaaday in kuwa ku lug lahaa ay ka fiicnaayeen xusuusta muddada-gaaban intii aan la isticmaalin. Sidaa darteed, in kasta oo dad badani aysan qaadanaynin daroogada iyadoo ujeedadu tahay tan tan, waxay u imaan doontaa inay tahay wax-ku-darsiga isticmaalkiisa. Taasina waa mid ka mid ah faa'iidooyinka aasaasiga ah ee dad badani ka goostaan ​​isticmaalka DMAA xitaa adiguba tani waxay ku dhacdaa qorshe la'aan.
Tallaabada ficil-celinta sare ayaa sidoo kale ah astaamo ay ciyaartoy badani jeclaan lahaayeen inay la kulmaan. Isticmaalka DMAA wuxuu jirka u horseedaa inuu feejignaan sare yeesho, tanina waxay hagaajinaysaa firfircoonida waxqabadka. Tani waxay ka dhigan tahay in dadka isticmaala DMAA ay firfircoon yihiin gaar ahaan inta lagu jiro jir dhiska ama tartamada. Daroogadu waxay ku shaqeysaa iyadoo la hagaajinayo heerka dheef-shiid kiimikaadka jirka.
Tani waxay markaa kadib keenaysaa in howlaha jidhku ku dhacaan si ka dhakhso badan sidii caadiga ahayd. Tan waxaa lagu muujiyaa iyada oo la haysto shakhsiyad aad u firfircoon oo feejigan. Si kastaba ha noqotee, ceebta kaliya ee wejigan gaarka ah ayaa ah in isticmaalka daroogada ee tartamada ay mamnuuc tahay.
Sidaa darteed, isticmaalkeeda si loo hagaajiyo ficil-celinta ficil-celinta inta lagu jiro ciyaaraha fudud lama oggola. Si kastaba ha noqotee wali waxaa isticmaali kara ciyaartooyda inta lagu jiro xilliga fasaxa si loo gaaro bulking iyo hagaajinta xawaaraha.
Cunnooyinka DMAA ma yihiin kuwo aamin ah?
Tani waa inay welwel ku noqotaa qofkasta oo kaqeyb galaya ciyaaraha tartamada. Daawada ayaa lagu taxay daawooyinka aan aaminka u aheyn inay isticmaalaan ururka daroogada adduunka. Hay'ado kale oo badan ayaa xaddiday isticmaalka DMAA xukunno gaar ah. Si kastaba ha noqotee, kani waa mowduuc soo jiitay aragtiyo kaladuwan oo kaladuwan.
Hay'adda Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) waxay tixgelineysaa in kaabista DMAA ay tahay mid aan ammaan u ahayn isticmaalka aadanaha. Hay'addu waxay ku doodeysaa inaysan jirin wax macluumaad ah oo ku saabsan ficilka DMAA ee u qalma inay noqoto daroogo aamin ah oo loo isticmaalo. Websaydhada wakaaladda, jidhku wuxuu dadka kula taliyaa inay iska ilaaliyaan isticmaalka daroogada qiima kasta ha lahaadee maadaama ay awood u leedahay inay halis ugu jiraan khataro caafimaad.
Mid ka mid ah welwelka aasaasiga ah ee FDA waa awoodda daroogada ee sababi karta vasoconstriction. Tani waxay ku doodayaan waa horudhaca cadaadiska dhiigga oo ugu dambeyntii u horseedi kara dhimasho haddii aan si dhakhso leh wax looga qaban. Dhibaatooyinka kale ee mareenka neef-mareenka ee ay u badan tahay inay la kulmaan isticmaalka DMAA waxaa ka mid ah dhibaatooyinka neefsashada, wadnaha oo istaaga iyo suuragalnimada suuxdin badan.
Sida laga soo xigtay FDA, isticmaalka daroogadu sidoo kale waxay u egtahay inay sababi karto xanuunno neerfaha ah maadaama ay inta badan ku shaqeyso iyada oo loo marayo saameynta habka dhexe ee neerfaha. Tani waxay noqon kartaa mid khatar ah maxaa yeelay waxay ku dhalan kartaa curyaannimo iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo dilaa ah.
FDA waxay ahayd mid aad u adkeysi leh si loo hubiyo in DMAA ay ku jiraan waxyaabo dheeri ah laga tirtiro suuqa gebi ahaanba. Furaha talaabooyinka kala duwan ee ay qaadeen ayaa ah inay soo saaraan farmashiyeyaasha daroogada warqado ka diirinaya inay iibiyaan DMAA oo ay ku jiraan waxyaabo dheeri ah. Haddii ay dhacdo inay ka helaan waxyaalahan dheeriga ah khaanadaha, hay'addu waxay ka codsanaysaa kuwa wax iibiya inay baabi'iyaan oo ay ka waantoobaan inay amar kale ka soo saaraan soo saarayaasha.
Ilaa hadda, shirkado badan ayaa u hoggaansamay. Ololahani wuxuu bilaabmay 2012, wuxuuna si buuxda u dhaqan galay maadaama uu jiro iib aad u hooseeya oo hadda jira oo ah kaabisyada DMAA. Waxaa sidoo kale jiray kiisas ay shirkadaha qaar sii wadaan soosaarka DMAA xitaa kadib markii laga codsaday inay joojiyaan FDA.
Kiisaska noocan oo kale ah ayaa lagu arkay 2013 markii shirkad la yiraahdo USPLabs ay diiday inay joojiso soo saarista nafaqada. FDA waxay joojisay howlahoodii, shirkadii laga hadlayeyna waxay ahayd inay burburiso alaabtii horey suuqa ugu jirtay. Qiimahooda tafaariiqeed ee la saadaaliyay wuxuu ahaa ilaa $ 8 milyan.
Tani waxay muujineysaa sida ay hay'addu ugu diyaar garoobeyso inay hubiso in soosaarka wax soo saarka DMAA la joojiyo oo aan hal dawo oo isku mid ah loo helin muwaadiniinta dalka. FDA ayaa tallaabo dheeri ah sii qaaday waxayna liis garaysay magacyada kala duwan ee soo-saarayaashu isticmaali karaan si looga hortago macaamiisha inay ogaadaan inay cunayaan DMAA. Tani waxay ka dambeysay ka dib markii ay wakaaladdu ogaatay in shirkado badan ay soo saarayaan dawadan iyagoo wata magacyo qarsoon si looga ilaaliyo macaamiisha inay si toos ah u aqoonsadaan daroogada la mamnuucay.
Qaar ka mid ah magacyada liiska madow waxaa ka mid ah Geranamine iyo Methylhexanamine. Shirkadaha kale waxay tilmaamayaan in kaabista ay ku jirto soosaarida dhirta Geranium. Tani waa tilmaame joogitaanka DMAA. FDA waxay uga digeysaa macaamiisha inay ka digtoonaadaan wixii dheeri ah ee ka kooban waxyaabaha laga soo saaray Geranium.
Xayiraadaha ayaa la mid ah dalal kale sida Kanada iyo New Zealand iyo kuwo kale oo badan oo adduunka ah. Walaaca ugu weyn ee dhammaan waa saameynta uu ku leeyahay nidaamka neefsiga. Hay'adda la dagaallanka daroogada ee adduunka ayaa sidoo kale liis garaysay Budada DMAA ka mid ah daroogada aan aaminka u aheyn isticmaalka aadanaha. Tan macnaheedu waa in laga mamnuucay adeegsiga ciyaartooyda ku lugta leh tartamada sida Koobka Adduunka.
Si kastaba ha noqotee waa loo oggol yahay isticmaalka tartamada qaarkood gaar ahaan qiyaaso hoose oo ku jira heerarka la oggol yahay. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer way fiicantahay in la hubiyo ku saabsan xaddidaadaha tartanka ee qofku ka qaybqaato ka hor intaadan qaadan daroogada si looga fogaado degitaanka dhibaatada.
Mawduuca ah in DMAA ay nabdoon tahay ayaa weji kale yeeshay ka dib dacwado kala duwan oo u dhexeeya FDA iyo shirkadaha kale. Shirkaduhu wali waxay ku adkeysanayaan in aysan jirin wax dhibaato ah oo ku saabsan iibinta kaabista maandooriyaha. Hal baaris ayaa keentay in DMAA ay runti ahayd wax soo saar geedka Geranium taasna waxaa ka horyimid FDA.
Si kastaba ha noqotee, hay'addu ma aysan siinin wax caddayn ah oo taageeraya si ay u taageerto sheegashadeeda ah in daroogada si farshaxan ah loo helay. Sida laga soo xigtay dhakhtar baaray sheegashooyinka ammaan darrada ah ee isticmaalka dheeraadka ah, wax saameyn ah oo aan laga fileynin qof caadi ah oo caafimaad qaba oo si sax ah u isticmaalay dheellitirka. Daawada ayaa ku dooday in qadarka DMAA ee laga helay ka-hor-jimicsiga ka hor ay ka hooseysay waxa loo arko inay sun u yihiin isticmaalka aadanaha.
Baadhitaan kale, dadka dhalinyarada ah ee u isticmaalaya DMAA kicin ahaan inta lagu jiro xafladaha waxaa lagu ogaadey inay yeeshaan cudur guud, istaroog maskaxeed. Tani waxay sii xoojisay sheegashada FDA ee ku saabsan amniga isticmaalka DMAA ee dheeri ah. Si kastaba ha noqotee, baadhitaan kale ayaa burburiyey caddaynta taageeraya ee FDA qaybo ka dib markii la ogaaday in dhalinyarada su'aashu ka taagan tahay ay isticmaaleen qadar aad u sarreeya oo daroogada ah.
Waxaa la ogaaday inay qaateen kaniiniyaal oo midkiiba ku jiro ilaa 600mg oo ah maaddada firfircoon. Tani waxay ahayd mid aad u sarreysa sidii xaalad caadi ah, iyo inta ugu badan ee la filayo waxay ku dhowdahay 60mg hal kiniin dheeri ah. Tan macnaheedu waxa weeye in dhallintaasi toban jeer ka cuneen wixii ay ahayd inay qaataan.
Si kooban, marka laga eego aragtida cilmiyaysan, daroogada waxaa loo qaadan karaa inay tahay dawo-jimicsi hore oo ammaan ah iyada oo la tixgelinayo in qaddarka ku habboon ee daawooyinka la qaato. Haddii DMAA lagu qaato qiyaaso ka sarreeya 75mg, waxaa jira fursado sare u qaadista cadaadiska dhiigga ee heerarka aan loo baahnayn, sidaas darteedna waa in la tixgeliyaa. Daawada waa inay isticmaalaan oo keliya shakhsiyaadka aan taariikh u lahayn dhiig-karka waqtiyadii la soo dhaafay maadaama isticmaalkiisu ka sii dari karo xaaladda.
Sidoo kale, in kasta oo FDA ay diiday shirkado badan oo soo saara daawada, waxay leeyihiin dhibic ku saabsan badbaadada isticmaalka DMAA. Sidaa darteed laguma talin karo in la xaqiro tabashooyinkooda oo ay sii wadaan wax ka iibsashada suuqa madow. La-tashiga takhtarka ka hor intaan la isticmaalin budada jimicsiga kahor DMAA waa lama huraan.
Tani waxay hubin doontaa in natiijooyinka la rabo la gaaro iyada oo aan la caddeynin amniga caafimaadka isticmaalaha.
Maxaad ubaahantahay inaad ogaato kahor intaadan qaadanin waxyaalaha dheeri ah ee DMAA?
Waxaa jira xaqiiqooyin badan oo ah in waxqabad kasta oo kor u qaadaya cayaaraha waa inuu la yimaadaa kahor intaan ladajin DMAA oo ah daroogada kahor jimicsiga xulashada. Waxyaabahan qaarkood waxaa ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee ay u badan tahay inuu qofku la kulmo iyo sidoo kale faa'iidooyinka aad ka heli doonto isticmaalkiisa.
Waxyaabaha aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato ayaa ah in saameynta isticmaalka daroogadani ay la mid tahay waxa lagala kulmi karo ka dib isticmaalka kookaha iyo methamphetamine. Tani waxay ka dhigan tahay in suurtagalnimada samaynta mukhaadaraadku ay aad u sarreyso maadaama ay kaalinta koowaad kaga jirto kiciyaasha ugu awoodda badan ee la yaqaan. Waa inaad ka digtoonaataa inaad u fureyso jirkaaga mid ka mid ah balwadaha ugu xoogga badan markaad isku dayeyso inaad hagaajiso jimicsigaaga.
Si looga fogaado fursadaha balwadda, waa inaad hubisaa inaad si adag u raacdo waxa dhakhtarkaagu rumaysan yahay inay ugu badbaado badan tahay caafimaadkaaga. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la fahmo in isticmaalka daroogadu uu si toos ah u saameyn doono nidaamka dhexe ee neerfaha. DMAA waxay u dhaqantaa si la mid ah kafeynka iyadoo yareyneysa heerka soo dhaweynta ee CNS iyadoo jirkaaga ka dhigeysa mid aad u feejigan.
Daroogadu way ka xoog badan tahay kafeega waxayna jidhkaaga siin doontaa tamar kacsan oo aad u baahan tahay inaad ku bilowdo tababarkaaga jimicsi qoraal sare. Sidaa darteed mar kale waa muhiim in la hubiyo qiyaasta aad isticmaaleyso maaddaama daroogada ay si toos ah u saameyn ku leedahay mid ka mid ah qaybaha ugu xasaasiga ah jirka. Kiis la soo sheegay 2012, koox dhalinyaro ah ayaa u adeegsaday daroogada intii lagu jiray kalfadhigii xafladda.
Waxay cuneen toban jeer in kabadan waxa lagama maarmaanka u ah hal mar oo qaadasho. Ujeeddadu waxay ahayd in 'si dhakhso leh' loo helo, tanina waxay u noqotay mid ay ku sii socdaan. Daroogadu waxay saameyn ku yeelatay habdhiskooda dhexe ee neerfayaasha, badankoodna waxaa lagu ogaaday inuu ku dhacay madax-dhiigfuran maskaxda ku dhaca oo ah cudur aan loo baahnayn
Isticmaalayaasha sidoo kale waa inay fahmaan in ka duwan noocyo kale oo badan oo jimicsi ah oo ka kooban nitric oxide, DMAA waxay sababtaa vasoconstriction of veins. Tani waxay ka dhigan tahay in shaqsi qaatay kaniiniyada DMAA uu ka gaabin doono xididdada dhiigga kan kale ee aan qaadan. Xaaladdan waxay noqon kartaa mid dilaa ah haddii ay ku dhacdo qof qaba dhibaato dhiig karka maadaama ay u badan tahay inuu sii dheereeyo darnaanta xanuunka.
Sidaa darteed, shaqsi la xanuunsanaya dhiig karka waa inuu ka waantoobaa isticmaalka DMAA.
Isticmaalka daroogada waxay u egtahay inay sababi karto qulqulka dhiigga oo kordha iyo dareenka tamar sare. Isku-darka kaabista iyo daawooyinka kale ee jirka xoojiya waxay noqon karaan kuwo khatar ah tani waxay u horseedi kartaa jirkaaga inuu helo tamar aad u fara badan oo aadan awoodin inaad xamili karto. Waxaa lagugula talinayaa inaad fahanto in DMAA ay ugu horeyn tahay kaabis jimicsi kahor oo aan loo isticmaali karin ujeedooyin kale.
Dadka qaar ayaa waagii hore u isticmaali jiray daroogada xoojinta galmada, laakiin tani waa khalad. Waxay u horseedi kartaa inaad u gudubto miyir-beel haddii lagu xadgudbo waana in marwalba la tixgeliyaa inta lagu jiro isticmaalka.
DMAA jimicsi hore iyo waxyeelada hore ee tababarka
Isticmaalka DMAA kadib, dadka qaar waxay la kulmeen waxyeelo jimicsi hore oo ay kujiraan lallabbo iyo matag. Tani waa caadi, waxayna ka dhigan tahay in jirkaaga laga yaabo inuu si xun uga falcelinayo daroogada. Si kastaba ha noqotee, matag iyo lallabbo lagama yaabo inay si toos ah u keenaan isticmaalka DMAA. Kiimikada waxay kujirtaa waxyaabo dheeri ah oo leh waxyaabo kale, waxayna sidoo kale sababi karaan matag.
Ka sokow, saameynta kale ee jimicsiga kahor waxay caan ku tahay isticmaalka kiciyaasha sida DMAA. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Uurka iyo naas-nuujinta
Kaabisyo badan ayaa la yimaada kala soocida dadka laga dhaafay isticmaalka, waxaana ugu muhiimsan iyaga ka mid ah hooyooyinka nuujinaya iyo sidoo kale kuwa uurka leh. Sababta ka dambeysa tan ayaa ah, marka laga hadlayo haweenka uurka leh, isticmaalka daroogooyinka waxay u badan tahay inay saameyn ku yeeshaan horumarka ilmaha aan weli dhalan. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo macluumaad badan laga heli karo oo ku saabsan adeegsiga waxyaabo badan oo dheeri ah oo loogu talagalay kooxaha dadka loo qoondeeyay, haddana kani ma aha daawooyinka DMAA ee jimicsiga kahor.
Waxaa jira macluumaad aad u yar oo arrintan la xiriira. Sidaa darteed, kuwa doonaya inay u isticmaalaan DMAA daroogada kahor jimicsiga oo uur leh ama nuujinaya waa inay ka gaabsadaan inay sidaa sameeyaan maaddaama ay jiraan macluumaad aad u yar oo ku saabsan dhibaatooyinka la filayo. Tani waxay noqon doontaa hab nabadgelyo ah halkii loo saadaalin lahaa isticmaalaha saameyno aysan waligood ka fikirin.
Daroogada DMAA waxaa lagu sifeeyay inay tahay kicin. Tani waxay ka dhigan tahay inay u badan tahay inay saameyn xun ku yeelato suurtagalnimada qalliin badbaado leh gaar ahaan markii la qaado wax yar uun ka hor hawlgalka. Sidaa darteed si looga fogaado xaaladdan oo kale, waxaa lagugula talinayaa inaad ka waantowdo adeegsiga haddii laguu dejiyo qalliin qalliin.
Waxaa lagugula talinayaa inaad iska ilaaliso inaad qaadato wax kiciya qalliinka ka hor. Tani waa in laga fogaado dhiig karka oo noqon kara mid dilaa inta lagu jiro qalliinka.
Tani waa saameynta ugu badan ee muuqata ee la mid ah dadka isticmaala DMAA. Tani waa sababta oo ah daroogadu waa mid kicisa oo daawooyinka ugu badan ee fasalkan waxaa loo yaqaanaa inay kiciyaan cadaadis dhiig oo sarreeya gaar ahaan marka lagu xadgudbo. DMAA waxay u horseedaa cidhiidhiga xididdada dhiigga, tanina waxay keentaa in dhiiggu ku qulqulo si ka dhakhso badan heerka caadiga ah ee keena dhiig karka.
Sababtoo ah saameyntan, isticmaalka DMAA ayaa lagu ogaadey inuu sababo cudurro kale oo xun sida istaroogga maskaxda. Xaaladda astaamahan, isticmaaluhu waa inuu ka fogaadaa isticmaalka daroogada isla markiiba. Sababtuna waxay tahay isticmaalkeeda oo sii socda waxay u badan tahay inuu calaamadaha kordhiyo sidoo kalena wuxuu u horseedi karaa dhimasho.
Si kastaba ha noqotee, waa suurtagal in laga hortago dhiig karka iyada oo loo marayo isticmaalka la xakameynayo. Tani waxay ku siin doontaa natiijooyinka ugu fiican haddii ay fududeeyaan dhakhtar kaas oo qaadi doona baaritaanno si loo go'aamiyo waxa qiyaasta ugu habboon ay tahay.
Immisa ayey DMAA ku sii jirtaa nidaamkaaga?
Wadada ugu caamsan ee maamulka DMAA waa afka. Markii sidan loo qaato, daroogadu waxay qaadan doontaa siddeed daqiiqo si ay u gasho dhiigga macaamilka. Si kastaba ha noqotee, saameynta isla markiiba lama dareemi doono maaddaama daroogooyinka badankood ay leeyihiin waxa loogu yeero muddada nolosha nuska ah. Tani waa waqtiga loo baahan yahay in daroogadu kala daadato oo ay u sii dayso maaddooyinka firfircoon ee jirka si loogu isticmaalo.
Nolosha nuska DMAA waa ilaa 8 saacadood. Sidaa darteed, shaqsiga damacsan inuu kor u qaado jidhkiisa / jirkeeda ka hor kulanka jimicsiga waa inuu qaataa daroogada 8 saacadood ka hor si loo siiyo waqti ku filan oo daroogada jidhka loogu nuugo.
Isticmaalka daroogada ka dib, dareen guud oo sarreeya ayaa la dareemayaa. Badanaa, tani maahan dareen ay dadka intiisa badani jeclaan lahaayeen inay la kulmaan waqtiga oo dhan gaar ahaan markay shaqeynayaan. Sidaa darteed, waxaa jira baahi loo qabo in la ogaado waqtiga ay qaadato daroogada in laga saaro jirka marka la cuno ka dib.
Celcelis ahaan, daroogada ayaa jirka lagu hayaa ilaa 24-saac maalin kadib taas oo dareenka aan khibrad dambe loo helin.
Faa'iidooyinka DMAA ee gubashada Dufanka
Suurtagal, waxaad maqashay khuraafaad iyo xaqiiqooyin badan oo laxiriira awooda DMAA ee miisaanka oo yaraata waxaadna jeclaan laheyd inaad ogaatid midkood macno samaynaya Waa hagaag, xaqiiqda dhabta ah ee jirta ayaa ah in kaabista DMAA ay kaa caawin karto inaad daadiso miisaan aad u tiro badan siyaabo kala duwan.
Marka hore, kaabis ah 'Dimethylamylamine supplement' ayaa kaa caawin karta inaad kordhiso feejignaanta iyo dhiirigelinta illaa heerka kordhinta dulqaadkaaga xanuunka iyo tamarta. Tamarta korodhay iyo u dulqaadashada xanuunka ayaa kaa caawin doonta inaad si guul leh u marto tababar culus oo miisaan lumis ah.
Marka ay timaado gubashada dufanka jirka, 1 3 Dimethylamylamine waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee gubta baruurta kuleylka leh. Sida ugu badan ee nafaqada sumcadda sumcadda leh, DMAA waxay kicisaa gubashada dufanka si ka dhaqso badan sidii caadiga ahayd kiis taas oo gubashadii dufanka ay u badan tahay inaysan dhicin.
Ma isweydiineysaa maxay qabtaa dmaa si aad u gubto dufanka jirkaaga?
Hagaag, DMAA waxay ku xoojisaa tamartaada marinka vasoconstriction, oo ah geedi socod ku lug leh xaddidaadda socodka dhiiggaaga. Socodka dhiigga ee xaddidan ayaa sababa koritaanka murqaha iyo sidoo kale kicinta murqaha. Sidan oo kale, heerkaaga dheef-shiid kiimikaadku wuu kordhayaa, taasoo horseedaysa gubasho dhaqso badan oo wax ku ool ah oo dufanka jirka ah.
Dhismayaasha DMAA, ephedrine iyo amphetamines waxay wadaagaan waxyaabo badan oo isku mid ah. Sidan oo kale, DMAA waxay kicin kartaa nidaamka neerfaha ee bini'aadamka, taasoo keeneysa in maskaxda ay sii deyso norepinephrine. Sidoo kale, waxay ka dhigeysaa kuwa soo dhoweeya alfa iyo beta inay kordhaan waxqabadka noradrenaline, taasoo kicinaysa nidaamka soo-dhoweynta adrenergic si aan toos ahayn.
Isku darka labada ficil waxay keeneysaa koror ku yimaadda xaddiga dheef-shiid kiimikaadka ee jirka iyo sidoo kale burburka dufanka ka yimaada unugyada loo yaqaan 'adipose tissue' si loo soo saaro tamar - habkan waxaa loo yaqaan lipolysis.
Saamaynta DMAA si weyn ayaa loo kordhin karaa haddii loo wada isticmaalo maaddooyinka kale ee kiciya sida kafeega.
Haddii loo adeegsado kafeyn, saameynta DMAA ee heerka dheef-shiid kiimikaadka waxay kordheysaa 35% halka waxtarka dufanka gubanaya uu kordhayo in kabadan 169%.
Daraasad dhowaan la sameeyay si loo baaro waxtarka DMAA ee gubashada dufanka, 32 qaangaar ah oo caafimaad qaba oo liqay hal kaabsol oo dheeri ah maalin kasta 14 maalmood ayaa la kulmay dufan weyn.
Dhibaatooyinka kale ee DMAA
Sida daroogo kasta oo kale, DMAA waxay u badan tahay inay yeelato waxyeellooyin qaarkood haddii lagu xadgudbo. Waa kuwan qaar ka mid ah suurtagalnimada Waxyeellooyinka DMAA:
1. Dhiig-baxa maskaxda
In kasta oo aysan jirin wax caddeyn ah oo si toos ah ugu xiraya DMAA dhiig-baxa maskaxda, haddana waxaa jira kiis la soo sheegay oo ah qof soo saaray xaaladda ka dib markii uu qaatay khamri xoog leh iyo isku darka DMAA. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la ogaado in DMAA aan loo isticmaalin khamriga haddii kale saameyntaas oo kale waxay u badan tahay inay adkaato.
2. Dhaawac beerka
Shaqada ugu weyn ee beerka ayaa ah inay sifeeyaan dhiiga marinka dheef-shiidka ka hor inta aysan u oggolaan inuu u gudbo qaybaha kale ee jirka. Ka sokow, beerku wuxuu dheef-shiidaa daroogooyinka wuxuuna kaloo sumoobaa kiimikada.
Markaad qaadatid kiniinka DMAA ama aad kabtid, beerku waa inuu la macaamilaa maaddada dawada / kaabista. Natiijo ahaan, beerka ayaa laga yaabaa inuu la kulmo enzyme-soo-saar kaas oo aakhirka noqon kara sun. Daawada sidoo kale waxay sababi kartaa caabuq beerka ah kaas oo waqti kadib keeni kara waxyeelo joogto ah oo beerka ah ama nabar.
3. Cadaadis dhiig oo sarreeya
Marka la tixgeliyo inay tahay wax kiciya, Dimethylamylamine waxay kordhin kartaa cadaadiska dhiigga. Sidan oo kale, dadka la ildaran dhiig karka waa inay iska ilaaliyaan qaadashada daroogada ama kaabisyada ay ku jirto.
4. Wadne garaac aan caadi ahayn (wadnaha arrhythmia)
In kasta oo ay dhif tahay, saameynta kicinta ee DMAA waxay u horseedi kartaa garaaca wadnaha oo deg deg ah tanina waxay ka sii dari kartaa wadnaha wadnaha ee dadka la xanuunsanaya xaaladda. Sidaa darteed, haddii laguu qorsheeyo qalliin, waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato DMAA laba toddobaad ka hor taariikhda qalliinka, haddii kale, kororka dhiig karka iyo garaaca wadnaha oo aan caadiga ahayn sababtoo ah saameynta daroogada ayaa faragelinaysa qalliinka qalliinka.
Daraasad la sameeyay si loo baaro saameynta DMAA, natiijooyinka waxay muujiyeen in 12 qof oo qaangaar ah oo caafimaad qaba oo mid walboo ka mid ah uu cunay laba kaabsal oo ah OxyELITE Pro, oo ah nafaqo dheeri ah oo ay ku jirto Dimethylamylamine, wuxuu lahaa garaaca wadnaha oo kordhay iyo sidoo kale inuu kor u kacay cadaadiska dhiigga.
Si kastaba ha noqotee, siddeed qof oo qaangaar ah oo caafimaad qaba oo qaatay 25 mg ah oo ah DMAA waxay leeyihiin garaaca wadnaha oo caadi ah iyo cadaadiska dhiigga xitaa ka dib markay qaateen daroogada. Tani waxay muujineysaa in daroogadu aysan wax saameyn ah ku yeelanaynin garaaca wadnaha ama cadaadiska dhiigga haddii lagu cuno qaddarkaas.
5. Kordhinta Glaucoma
Ka sokow inuu yeesho saameyn kiciya, Dimethylamylamine waxay sidoo kale sababtaa ciriiriga xididdada dhiigga. Isku darka labada saameyn waxay u horseedi karaan sare u kaca noocyada qaar ee glaucoma. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad iska ilaaliso qaadashada daawada haddii aad qabtid glaucoma.
6. Waxyeellada beerka
Waxaa sidoo kale jira kiisas la soo sheegay oo ku saabsan waxyeelada beerka ee ka dhalatay isticmaalka DMAA. Shan sano ka hor, 36 qof oo qaatay OxyELITE Pro, oo ah nafaqo dheeri ah oo leh DMAA oo ka kooban, ayaa laga helay dhaawaca beerka. Mid ka mid ah bukaannada ayaa dhintey halka laba kalena ay ku guuleysteen inay badbaadaan ka dib markii beerka laga beddelay.
Waxaa xusid mudan in dhammaan bukaanada 36 ay qaadanayeen qiyaasta lagu taliyay ee dheeraadka ah laakiin 27 ka mid ah waxay qaadanayeen nooca DMAA-ka ee kaabista ah. Sidaa darteed, ma sahlana in la dhiso suntan ku jirta kaabista.
7. Dhiigbax Maskaxda ah
Isticmaalka DMAA ayaa sidoo kale lala xiriiriyay dhiigbax maskaxda ah. Xaqiiqdii, seddex kiis oo ah dadka maskaxda dhiigoodu kudaatay kadib markay isticmaaleen DMAA ayaa lasoo sheegay. Si kastaba ha noqotee, waxaa la xaqiijiyay in dhibbanayaasha ay si joogto ah u isticmaali jireen daroogada khamriga ama kafeega.
Mid ka mid ah kiisaska, qof caafimaad qaba ayaa qaatay qiyaasta lagu taliyey ee nafaqada ee ay ku jirto Dimethylamylamine intaas ka dib, wuxuu bilaabay inuu la kulmo madax xanuun daran oo uu ku xigo dhiig maskaxda ku dhaca.
8. Weerarka Wadnaha
Waxaa jira kiis la soo sheegay oo ah nin 22 jir ah oo caafimaad qaba oo ku dhacay wadno xanuun ka dib markii uu isticmaalay Jack3d, oo ah nafaqo dheellitiran oo ay ku jiraan DMAA oo ay weheliso kafeyn muddo saddex toddobaad ah.
9. Lalabbo iyo Matag
Hal daraasad oo dib u eegis ku sameyneysa dhibaatooyinka soo raaca ee DMAA ayaa muujisay in 15% oo ka mid ah 56-ka qof ee qaatay kaabisyada ay ku jiraan daroogada (OxyElite Pro) ay matag iyo lallabbo la soo derseen ka dib markii ay qaateen kaabisyada Si kastaba ha noqotee, ma jirin wax caddayn ah oo la muujiyay haddii ay tahay DMAA ee dheellitirka oo sababay lallabbo iyo matag ama waxyaabo kale ayaa mas'uul ka ahaa.
10. Daciifnimo kumeelgaar ah
Saameynta ugu caansan ee la xiriirta isticmaalka DMAA waa lumis muuqata oo tamar ah ('shil') qiyaastii dhowr saacadood ka dib qaadashada daroogada. Si kastaba ha noqotee, maahan qof kasta oo isticmaala daroogada inay la kulmaan saameyntan.
Waxyeellooyinka kale ee suurtagalka ah ee DMAA waxaa ka mid ah:
Xanaaq ku dhacay
Dhimashooyinka (in kasta oo ay dhif tahay)
Cudurka lactic acid
Kuwaani waa qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee DMAA. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan daraasado si gaar ah u falanqeynaya dhibaatooyinka soo raaca ee daroogada. Inta badan daraasadaha ku saabsan saameynta daroogada waxay ku lug leeyihiin nafaqada nafaqada leh DMAA oo ah mid ka mid ah maaddooyinkooda halkii laga isticmaali lahaa daroogada go'doomin. Iyadoo la tixgelinayo in qiyaasta saxda ah ee daroogada ee kaabayaasha ah aan la dhisin, ma jiraan wax sax ah oo lagu soo gabagabeynayo in dhibaatooyinka soo raaca ay yihiin natiijada DMAA. Waxyaabaha kale ee kaabayaasha ah ayaa sababi kara waxyeelada xun.
Ka sokow, mararka qaarkood, saameynta xun ayaa ka dhalanaysa adeegsiga alaabada ku saleysan DMAA. Qaar ka mid ah dadka isticmaala ee soo maray dhibaatooyinkaas waxaa lagu soo warramey inay qaateen illaa 1,000 mg maalin kasta. Xaaladahaas oo kale, saameynta waa laga hortagi karaa haddii midkood ku dheganaado qiyaasta saxda ah ee saxda ah. Waxaan ka hadli doonaa qiyaasta DMAA ee saxda ah muddo gaaban.
Ka sokow, 1, 3 Dimethylamylamine waxaa lagu ogaadey inay saameyn aad u daran ku yeelaneyso nidaamka neerfaha ee bartamaha hadii lala isticmaalo kiciyeyaasha CNS ama nootropics-ka ee saameeya nidaamyada adrenergic. Tani waxay sababi kartaa waxyeelo kala duwan. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad iska ilaaliso saameynta, hubi inaadan isku darin DMAA kiciyeyaasha ama nootropic.
Sidoo kale, waxaa lagugula talinayaa in dheefaha DMAA aan loo isticmaalin maalin kasta. Marka, waa maxay qiyaasta saxda ah ee Dimethylamylamine?
Halkan waxaan ku tegi!
Qiyaasta saxda ah ee dimethylamylamine waxay kuxirantahay arrimo kaladuwan sida da'da iyo xaalada caafimaad ee isticmaalaha, iyo xaaladaha kale. Si kastaba ha noqotee, hadda, ma jiro macluumaad cilmi ku filan oo lagu kalsoonaan karo oo lagu dhisi karo qiyaasta saxda ah ee daroogada.
Haddii ay dhacdo inaad iibsatay sheyga DMAA dufanka / miisaanka oo yaraada, hubi inaad aqriso oo aad raacdo tilmaamaha adeegsiga ee ku qoran calaamadihiisa oo aad la tashato dhakhtarkaaga, farmashiistaha ama khabiir kale oo caafimaad oo sumcad leh kahor intaadan isticmaalin.
Caadi ahaan, qiyaasta bilowga ah ee DMAA waxay u dhaxeysaa 10 mg ilaa 20mg. Ama ½ u adeegid sheyga DMAA oo loo dhan yahay ee aad dooratay. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad aragto oo aad dareento sida daroogadu ay saameyn ugu yeelan karto haddii aad ku qaadato qadar buuxa.
Waqti ka dib, waxaad kordhin kartaa qiyaasta 40 ama 60 mg maalintii. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax caddayn dhab ah oo taageeraya qiyaasaha qiyaasta.
Waxay umuuqdaan qiyaasta caadiga ah ee alaabada ay kujiraan dimethylamylamine. Qiimayaashu waxay ka dhashaan talooyinka adeegsiga ee ay bixiyaan soosaarayaasha kaabayaasha DMAA ee hadda suuqa ku jira.
Waa inaadan isticmaalin wax soo saarka DMAA maalin kasta haddii aad rabto inaad ku guuleysato natiijooyinka ugu fiican. Inta badan kaabista DMAA waxay u isticmaalaan iyaga laba ilaa saddex jeer usbuucii ugu badnaan. Adoo isticmaalaya kaabisyada inta jeer ee noocan oo kale ah, waxaad si fudud u maareeysaa inaad ka fogaato inaad ku tiirsanaato badeecooyinka.
Sida la doorbidayo, isticmaal kaniiniyada DMAA markaad ubaahantahay tamar ama xoojinta diirada ama kudhowaad 30 daqiiqo kahor jimicsiga jirka. Markaad sidaas sameysid, waad awoodi doontaa inaad iska ilaaliso qaar pre-workout supplement waxyeelo.
4-ta Dawladood ee Dunida ugu Caansan uguna iibinta Daroogada gubta
Waxaa jira daawooyin kala duwan oo ka caawiya luminta dufanka iyadoo la yareynayo damaca, kordhinta dheef-shiid kiimikaadka jirka iyo / ama la ilaaliyo rabitaanka saxda ah. Daawooyinka gubta dufanka ayaa sidoo kale qofka u kordhin kara kartida jimicsiga adoo kordhinaya tamarkiisa ama xoogiisa iyo diiradiisa.
Shaxda soo socota waxay muujineysaa afarta ugu sareysa ee iibiya daroogada gubta dufanka adduunka oo dhan.
Magaca daroogada iyo Lambarka CAS Sida ay u shaqeyso
Budada Synephrine -CAS: 94-07-5 Budada Synephrine waa beta-agonist oo ka shaqeysa kordhinta heerka dheef-shiid kiimikaadka jirka, isticmaalka kalooriga iyo heerarka tamarta
1,3-dimethylamylamine (budada DMAA) - CAS 13803-74-2 Qaabdhismeedka kiimikada ee u eg kan Ephedrine, 1,3-dimethylamylamine waa kiciyaha neerfaha ee loo yaqaan 'synthetic neural stimulant' oo loo isticmaalo qayb weyn oo ka mid ah nafaqada nafaqada si looga caawiyo horumarinta waxqabadka cayaaraha iyo kor u qaadista tamarta
Clenbuterol hydrochloride-CAS 21898-19-1 Ka sokow inuu leeyahay awood gubasho dufan leh, Clenbuterol hydrochloride sidoo kale waxay leedahay saameyn muuqata oo heer-kulka iyadoo kordhinaysa cadaadiska dhiigga waxayna keenaysaa wadnaha inuu si adag u shaqeeyo.
Ka sokow, waxay u keentaa glycogen inay burburto, markaa gubashada dufanka jirka.
Salbutamol (Albuterol) - CAS 18559-94-9 budada salbuterol markii hore waxaa isticmaali jiray dadka qaba neef ama cudurka sambabaha ee joogtada ah si loo wanaajiyo neefsashadooda. Si kastaba ha noqotee, maalmahan, daroogada ayaa si muuqata loo isticmaalaa si kor loogu qaado luminta degdegga ah ee dufanka, loogu talagalay dayactirka muruqyada inta lagu jiro nidaamka luminta dufanka iyo sidoo kale in lagu xoojiyo adkeysiga marka qofku fulinayo jimicsiga luminta dufanka.
Haddii aad rabto inaad iibsato dmaa ama mid ka mid ah daroogooyinka gubanaya ee kor ku xusan, waxaad si fudud u sameyn kartaa dhib la'aan AASraw, com.
1, 3-dimethylamylamine waxay bixisaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin ka caawinta hagaajinta xusuusta muddada-gaaban iyo ficil-celinta ficil-celinta iyo sidoo kale dhismaha jirka iyo gubida dufanka jirka. Si kastaba ha noqotee, waa inaad hubisaa inaad la tashato bixiye daryeel caafimaad oo sumcad leh oo aad u hoggaansanaato qiyaasta lagu taliyey si looga fogaado dhibaatooyinka soo raaca sida dhiig karka, arrimaha wadnaha iyo dhaawaca kelyaha, iyo khataraha kale ee caafimaad ee la xiriira.
Si kastaba ha noqotee, u hoggaansanaanta qiyaasta saxda ah maahan damaanad ah inaadan la kulmi doonin saameynta xun. Sidoo kale, waxaa xusid mudan in aysan jirin caddeyn cilmiyeed oo si toos ah ugu xiraya saameyntan isticmaalka DMAA oo keliya; taasi waa, maqnaanshaha waxyaabo kale oo dheeri ah.
Bloomer RJ1, Farney TM, Harvey IC, Alleman RJ - Astaamaha badbaadada ee kafeega iyo kaabista 1,3-dimethylamylamine ee ragga caafimaadka qaba - Hum Exp Toxicol. 2013 Nofeembar; 32 (11): 1126-36. doi: 10.1177 / 0960327113475680. Epub 2013 Febraayo 19.
Schilling BK (1), Hammond KG, Bloomer RJ, Presley CS, Yates CR. - Saamaynta jir ahaaneed iyo farmasokokinikada ee maamulka 1,3-dimethylamylamine ee ragga - BMC Pharmacol Toxicol. 2013 Oktoobar 4; 14:52. doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52.
"1,3-Dimethylamylamine," Examine.com, oo lagu daabacay 24 Abriil 2014, markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay 14 June 2018,
Vorce SP, iyo al. Dimethylamylamine: waa daawo keenta natiijooyin wanaagsan oo difaaca jirka ah oo loogu talagalay amphetamines. Jal Anal Toxicol. (2011)
Gee P, Jackson S, Easton J. Kiniin kale oo qadhaadh: kiis sun ah kiniiniyada xisbiga DMAA. NZ Med J. (2010)
Tilmaanta 'Merck Index': 'Encyclopedia of Chemicals', Daroogooyinka, iyo Biyoolojiyada (Buug).
Lisi A, iyo al. Daraasado ku saabsan methylhexaneamine oo lagu daro saliida saliidda iyo saliida. Futada Baaritaanka Daroogada. (2011)
Bloomer RJ, iyo al. Saamaynta 1,3-dimethylamylamine iyo kafeyn keli ama isku darka garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga ragga iyo dumarka caafimaadka qaba. Phys Sportsmed. (2011)
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Sunifiram Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Duufarka Macdanta